Archive du 20170717
Misavorovoro ny fanjakana Niala ny minisitry ny vola, hiova ny governemanta ?
Mbola voaporofo indray omaly fa misy zavatra tsy milamina intsony ao anatin’ny governemanta sy ny fitondram-panjakana amin’ny ankapobeny.
Filoha Rajaonarimampianina Niteniteny foana indray
Ny fanajana ny zo sy fahalalahan’ny hafa, ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka ary ny fiarovana ny fahamendrehan’ny firenena sy filaminan’ny fanjakana,
Botozaza Pierrot Anaovan’ny fanjakana antsojay ihany koa
Saro-tahotra loatra amin’ny hetsika misy ataon’ny olom-pirenena ankehitriny ny fitondram-panjakana, hany ka izay hetsika misy na ara-tsosialy tsotra ataona fikambanana ara-tsosialy aza dia anaovana antsojay.
Sendikan’ny Jirama Hitokona rehefa tsy henoina
Ny fanajana ny fepetra anaty fifanarahana iombonana, indrindra ny mikasika ny resaka fandraisana mpiasa voalaza ao anatin’ny andininy faha-12 aloha no tena hotakian-dry zareo ao anatin’ny sendikan’ireo
Fibodoana tany eny Manazary-Ilafy Mahita làlana ambanin’ny tany ny karana
Mitohy ny fifanolanana eo amin’ny fianakaviana Malagasy iray tompon’ny tany manana refy 10 Ha mahery eny Manazary Ilafy, eo amin’ny toerana antsoina hoe Antsahamioridoha,
Ambilanibe Andavamamba Trano efatra no indray may
Trano efatra no indray may tetsy amin’ny fokontany Ambilanibe Andavamamba ny sabotsy antoandro teo tokony ho tamin’ny 11 ora. Vokatry ny “court circuit” avy amina tokantrano iray no nahatonga ny loza.
Ny faran’ny herinandro teo no efa nandeha ny resaka amin’ny hisian’ny fanovana governemanta, saingy tsy tontosa aloha hatreto.
Mpiaro ny zon’ny mpanjifa Tsy manaiky ny hanalana ireo mpivarotra 32 isa ao Farafangana
Hitrangana olana ara-tany goavana ao amin’ny kaominina ambonivohitra Farafangana amin’izao fotoana izao.
Airtel beach party andiany faharoa Hanomboka ny 06 aogositra ho avy izao indray
Taorian’ny fahombiazana azon’ny mpikarakara orinasam-pifandraisana Airtel sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy tamin’ilay hetsika
Hiragasy makotrokotroka eny Ambohijatovo Mpijery 3.000 isaky ny alahady no andrasana
Raikitra indray ilay hetsika hiragasy makotrokotroka, fanao isaky ny vakansy lehibe tahaka izao eny amin’ny zaridainan’Andohalo.
Fifaninanana hidirana polisy Hentitra ny fanaraha-maso
Efa noraisina avokoa ny fepetra rehetra ialana amin’ny mety hisian’ny trangana kolikoly amin’ny fifaninanana hidirana ho polisim-pirenena nanomboka ny sabotsy teo,